Mgbawa Uto maka Ahịa Ahịa | Martech Zone
Otu ihe kpatara na ụlọ ọrụ anyị abụghị ụlọ ahịa ọdịnaya bụ n'ihi ebumnuche nke ịre ahịa n'ịntanetị abụghị ịmịpụta ọdịnaya, ọ bụ iji bulie azụmaahịa gị. Anyị na-ewepụta ọdịnaya (ọkachasị infographics na ọcha) maka ndị ahịa, mana ịpị mbipụta bụ naanị otu nzọ ụkwụ na nnukwu atụmatụ. Understandghọta onye ị na-edegara ya na ụdị ọdịnaya ha na-achọ kwesịrị ime tupu oge eruo. Ma ozugbo itinyere ọdịnaya, ị kwesịrị ijide n'aka na ọ na-syndicated na-akwalite n'ụzọ kwesịrị ekwesị jirichaa ya apụghị iru.
Kedu ihe Ọchịchị na-eto?
Enwere nnukwu ihe mgbochi ịbanye maka ịmepụta ngwaahịa maka web… mana ịnweta okwu ahụ nwere ike ịbụ oke ọnụ. Ndị na-ebido ahịa mbido na-enweghị ego iji kpọsaa ma ọ bụ kwalite ngwaahịa ha ga-ewepụta usoro azụmaahịa na-abụghị ọdịnala iji nweta ndị ahịa ọhụrụ en oke. A bịara mara nke a dị ka ibu hacking ọ jikọtara SEO, A / B Ule na Ahịa Ọdịnaya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka blọgụ gị too, ị nwere ike ịmụ otu ihe ma ọ bụ abụọ site na hacker ọdịnaya. Ọ na - echegbu onwe ya n'okporo ụzọ ma lekwasị anya n'ihe ọ bụla mana uto. Ihe omuma ihe omuma a gha enye gi nsogbu n'ime uche ha ma nyere gi aka ighota ihe omuma gi.
Nke a infographic si ebi akwukwọ na CoSchedule, Kalinda nchịkọta akụkọ mmekọrịta dị egwu maka WordPress nwere ọtụtụ atụmatụ. MARA: Infographics bu ezigbo usoro hacking!
Tags: content Marketingcoscheduleibu hacking